Koonfur Africa Oo Ka Hadashay Dilal Dalkeeda Loogu Geysto Soomaalida.
Dowlada koonfur Africa ayaa diiday sheegashada dhibaateynta iyo dilalka loo geysto muwaadiniinta shisheeyaha ee dalkaasi ku nool gaar ahaan Soomaalida oo labo maalin kasta kadib lagu dilo magaalada Cape town iyo deegaanada baadiyaha ee ka baxsan Caasimadda dalkaas.
Wasiirka u qaabilsan soo galootiga iyo guddiga u qaabilsan dowladaha ayaa wax uu sheegay in ay qalad tahay islamarkaana ay ka soo horjeedaan dilalka soomaalida loogu geesto gudaha dalka koofur Africa.
Mar uu u jawaabay guddiga jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur Africa ayaa waxa uu sheegay in soomaalidu ay noqdeen kuwo la u gaarsado oo dhibaatooyin kala duwan lagula kaco.
Waxaa jaaliyadda soomaaliyeed dalkaasi ee loo soo gaabiyo (SCBSA) ayaa waxa ay sheegeen in tan iyo bilowgii sanadkan 2017-ka in ay dhaceen dilalkii ugu badnaa ee loo geysto soomaalida kuwaa oo intooda badan ka dhaca magaalada Khayelitsha iyagoo tilmaamay in dambiilayaasha ay ku sugan yihiiin hareeraha magaalada Copetown.
Radabe waxa uu sheegay in soomaalidu qudhooodu yihiin kuwo hubeysan oo ilaaliya naftooda iyo tan hantidooda.
Waxaana intaa uu ku daray in dhamaan shisheeyaha ay u siman yihiin dalka koonfur Africa isagoo ku baaqay in dowladda lala shaqeeyo si loo ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta dalkaasi.